Sony Wena 3: Tarika marani-tsaina vaovao misy fizakan-tena mandritra ny herinandro iray ary tohanan'ny Alexa | Androidsis
Sony Nanapa-kevitra ny hanavao ny tarika Wena smart miaraka amin'i ny fanombohana vaovao ny famantaranandro Wena 3 ary izy rehetra aorian'ny fandefasana ny antsipiriany rehetra mba hahatonga azy io ho iray amin'ireo tsara indrindra hita eny an-tsena. Ny orinasa Japoney dia nanao dingan-dàlana ary hamirapiratra noho ny fanohanany an'i Alexa.
Saingy tsy izany ihany no zavatra tonga any, feno ihany izy io, manana endrika famolavolana dial izy, fahaleovan-tena tsara mba tsy hampidirana azy isan'andro, ankoatry ny zavatra hafa. Mampanantena i Sony Wena 3 fa hifaninana amin'i Huawei, Xiaomi ary koa miaraka amin'ny iray amin'ireo mpitarika amin'ity tontolo ity, Samsung.
1 Sony Wena 3, ny antsipiriany rehetra
2 Dikan-teny samihafa, fahaleovan-tena ary rendrika
3 Fahafahana sy vidiny
Sony Wena 3, ny antsipiriany rehetra
Ny efijery dia nitombo noho ireo maodely navotsotra, ankehitriny dia somary lehibe kokoa izy io mba hijerena tsara kokoa amin'ny lafiny rehetra ary misy vahaolana tsara. Mampiseho ny fampandrenesana rehetra misy, manana fanairana izy ary timer raha sendra ilainao izany amin'ny fotoana sasantsasany, afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny fivezivezena amin'ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery izy.
Izy io dia manana fanohanana an'i Alexa, afaka mifandray aminy isika amin'ny fampidirana mikrô ho an'ny baiko am-peo sy fanamafisam-peo hahafahan'ny mpanampy mamaly ny fangatahana. Izy io dia miaraka amin'ny NFC mitambatra izay manohana ny fandoavam-bola amin'ny magazay ara-batana, fa mandritra ny fotoana tsy iasàny miasa ao Japon fotsiny, ilay toerana ahatongavan'ilay fehin-tànana.
Sony Wena 3 dia miaraka amin'ny sensor amin'ny tahan'ny fo, afaka mamantatra ny saturation ny oxygen oxygen izy ary manisa ny VO2, ny bracelet koa dia manisa ny adin-tsaina sy ny fanarenana azy. Manampy ireo fantsona marani-tsaina hafa ihany koa izy io, isanandro ary manana mpandahatra torimaso, adiny firy hatoriana isan'andro, isan-kerinandro ary isam-bolana.
Dikan-teny samihafa, fahaleovan-tena ary rendrika
Ny Sony Wena 3 vaovao dia noforonina hifanaraka amin'ny famantaranandro mahafinaritra, ny maodely SUS316L dia tonga miaraka amina tadiny vy ary ny maodely Premium Black dia natambatra, dingana ara-batana amin'ny fametrahana setroka, tsy ho lany andro ary hanome toky fa haharitra mandritra ny androm-piainany.
Misy dikan-teny hafa raha tsy te hampiasa vy vy ianao, afaka misafidy hoditra na fingotra mahazatra ianao. Ny fehin-kibo dia mahatohitra rano 5 ATM, manana bateria maharitra herinandro iray miaraka am-perinasa feno ary manana mpampifandray manokana ho an'ny izany.
Sony Wena 3 tonga tany Japon tamin'ny 27 Novambra, Amin'izao fotoana izao dia tsy asehon'izy ireo raha handao ny firenena izy na tsia, izay mbola tsy nitranga tamin'ireo maodely teo aloha. Ny vidiny dia mety miova arakaraka ny maodely nofidinao, ny kininina vita amin'ny rubber dia misy vidiny JPY 24,000 (213 euro hanovana), ny hoditra avy any JPY 30,000 ka hatramin'ny 32,000 (249 euro) ary ilay vy avy any JPY 33,000. Ka hatramin'ny 35,000 (290 euro).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Sony Wena 3: Tarika marani-tsaina vaovao misy fizakan-tena mandritra ny herinandro iray ary fanohanana Alexa
Google dia nanambara fa ny sivana hatsaran-tarehin'ny fakantsary dia manimba ary tsy mandeha izy ireo raha tsy atao izany